वास्तवमै के हुँदैछ Xtra Man? | सौन्दर्य समीक्षा
Xtra Man - यो के हो?
तपाईंले एक्स्ट्रारेन्टबाट डाउनलोड गर्न चाहानु भएको फिल्म खोजी गर्नुहोस्। अब, कथा कहाँ सुरु हुन्छ जहाँ तपाई समस्याहरूको सामना गर्नु पर्‍यो स्वास्थ्य सम्बन्धी नतीजा भन्दा। त्यस्तै, ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई कहिलेकाँही मानव शरीरमा टेस्टोस्टेरोनको डिग्री कम गर्न र एस्ट्रोजेनको नतिजा विकास गर्न सक्षम बनाउन एन्टि-एन्ड्रोजेनहरू सिफारिस गरिन्छ। जबकि उनीहरूले शल्य चिकित्सा स्तन वृद्धि पनि गर्न सक्दछन्, यो काम गर्न बढेको मासुको अभावको कारण धेरै गाह्रो हुन सक्छ, किनकि प्राय जसो पुरुषहरूको छाती क्षेत्रमा अतिरिक्त टिश्यूहरू हुँदैन इम्प्लान्सन घुसाउन अनुकूल। यी पुरुषहरू जान्दछन् कि सम्भोग राम्रो हुन सक्छ र उनीहरूको orgasms बढी शक्तिशाली भएको हुन सक्छ, तर केवल त्यो घटना कसरी सिर्जना गर्ने भनेर बुझ्दैन।
टेस्टोस्टेरोन स्तरले आर्थिक निर्णयहरूको समयमा जोखिम लिनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। टेस्टोस्टेरोनको स्तरमा भएको डिग्री डिग्रीसँग जोडिएको थियो जुन महिलाले सोच्थे कि पुरुषहरूले उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने आशा गरिरहेका थिए। टेस्टोस्टेरोनको स्तरमा भएको वृद्धि पनि दुबै महिला र पुरुष दुवैमा पाइएको छ जुन हस्तमैथुन-प्रेरित संभोग गर्छ। सीमित समय पछि, तपाईं सेक्स ड्राइभ र वास्तविक lovemaking को अन्य गुणहरु मा एक लाभ देख्न सक्नुहुन्छ। जब यो धोइन्छ, यो निष्क्रिय हुन्छ र प्रभावहरू छोटो अवधिमा अदृश्य हुन्छन्। टेस्टोस्टेरोन प्रभावहरू सामान्य घटनाको समय द्वारा पनि वर्गीकृत गर्न सकिन्छ। शुद्ध पूरकताको क्षमता व्यक्तिगत प्रशंसापत्र मार्फत देखाईएको छ र सम्भवतः तस्वीरहरू पनि जैविक पुरुषहरूमा यसको प्रभावकारिता प्रमाणित गरी कागजात गरिएको छ।
शीर्ष विकल्पहरू Xtra Man
नुहाउने क्रममा क्रीम धेरै संख्यामा लगाउनेछ, यसको मतलब तपाईले पछि पुन: आवेदन गर्नु पर्छ। क्रीम पनि तपाईंको लि of्गको आकार बढाउन मद्दत गर्ने स्थितिमा हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। XTRA-Man Cream एक प्रभावी वस्तु हैन। यो धेरै मान्छे द्वारा जवाफ पछि धेरै प्रदान गर्दछ। Xtra Man क्रीम एक पूरक हो जुन प्रदर्शन बढावा दिनको लागि लि raising्गको आकार बढाउनको लागि बनाइएको हो जुन तपाईंलाई शारीरिक स्थानमा कठिनाइहरू ठीक गर्न आदर्श स्थानमा राख्दछ। त्यो भन्दा राम्रो, Cialis वा Viagar जस्तै औषधि आइटम विपरीत, जेल वास्तव मा कुनै पनि साइड इफेक्ट बिना नै पक्का निश्चित सबै जैविक अवयवहरु बाट बनेको छ। प्रोसोलुसन जेल बजारमा कुनै पनि स number्ख्याको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय र भरपर्दो पेनाइल वृद्धि उत्पादहरूमध्ये एक हो, तर त्यहाँ धेरै प्रश्नहरू छन् जुन तपाईंलाई ग्यारेन्टी गरिएको छ यसलाई आफैलाई एक प्रयास गर्नु अघि निर्णय गर्नु अघि।
नयाँ प्रश्नहरूको बारेमा Xtra Man
इरेक्शन राख्नको लागि, रगत लिgas्गमा लिंगमा रहनु हुँदैन जबसम्म संभोग संभोग हुँदैन, तर समय बित्दै जाँदा केहि पुरुषहरूको लागि बढ्दो गाह्रो हुन्छ। तपाईले आफ्नो चिकित्सकसँग कुरा गर्नु पर्छ यस्तो बृद्धि हुन सक्ने उत्पादनहरू जुन जुन रूप हुन सक्छ। केही ड्रग्सले अप्रत्यक्ष रूपमा केही समस्याहरूको उपचार गर्ने तरिकाको लागि टेस्टोस्टेरोनलाई लक्षित गर्दछ। टेस्टोस्टेरोन थेरापीले टाइप दुई मधुमेहको बृद्धि गर्न सक्छ।
टेस्टोस्टेरोन धेरै कशेरुका क्षेत्रहरूमा अवलोकन गरिन्छ। यो प्रदर्शन सुधार गर्न एक एथलीट द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर यो प्रायः खेलकुदमा डोपिंगको एक रूप मानिन्छ। यो केवल धेरै कारकहरू मध्ये एक हो कि आक्रमणलाई प्रभाव पार्छ र अघिल्लो अनुभव र वातावरणीय उत्तेजनाको प्रभावहरू अझ कडासँग सम्बन्धित छ। थप रूपमा, यो स्वास्थ्य र कल्याणको लागि तथा ओस्टियोपोरोसिस रोकथामको लागि आवश्यक छ। कम टेस्टोस्टेरोन अल्जाइमर रोगको बृद्धिसँग जोडिएको थियो।
पुरुषहरूमा, टेस्टोस्टेरोनले टेस्टिस र प्रोस्टेट जस्ता पुरुष प्रजनन ऊतकों को परिपक्वतामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र बढेको मांसपेशी र हड्डीको मास जस्ता माध्यमिक यौन विशेषताहरूलाई बढावा दिन्छ, र शरीरको कपालको विकासमा। यो postmenopausal महिलाहरु को लागी एक उपचार हुन सक्छ जब सम्म उनीहरु लाई प्रभावी रूप मा estrogenized छन्। एक्जोजेनस टेस्टोस्टेरोनले शुक्राणुजन्यताको दमनको बारेमा पनि ल्याउन सक्छ, केही उदाहरणहरूमा, बांझपन।
ग्राहक सेवा शानदार छ। यदि तपाईं आफ्नो ग्राहकहरूमा चिच्याउन सक्ने सम्भावना छ भने, त्यसोभए तपाईंले आफ्नो कम्पनी मोडलमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ। अधिक उत्पादन पछि गाढा blotchy लुक सही गर्न प्रयासमा लागू गरियो। समागमको दौरान आइटमले कत्ति धेरै महसुस गर्न सक्छ यसलाई सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ ताकि यसलाई कत्तिको गहिरो महसुस हुन्छ। XTRA - Man का निर्माताहरूले दावी गर्छन् कि यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन जुन यो क्रीममा आधारित छ भन्ने तथ्यका कारणले छ। यो याद राख्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि पुरुष वृद्धि उत्पादहरू केवल सानो पेनिस वा कम विश्वास भएका पुरुषहरूका लागि मात्र होईन।
कसरी छनौट गर्नुहोस् Xtra Man
कम स्पर्म गणना विभिन्न बाह्य वा आन्तरिक पक्षहरूको कारण हुन सक्छ। प्यानलको मात्रा बढ्दै जाँदा, राइडरले सटीक शारीरिक र आरामदायक फिट प्राप्त गर्न सक्छ जसले मांसपेशिहरुमा कम्प्रेसन दिन्छ। त्यहाँ कुनै त्यस्तो जानकारी दिइएको छैन। ब्रान्डको वेबसाइटमा जुन अवस्थित छैन।